यसरी बन्दैन देश
Wednesday, 10 April 2013 11:48	भुवन केसी
विश्व मानचित्रमा विभिन्न उपनामले चिनिने नेपाल आजभोलि बदनाम हुने अवस्थामा छ। वर्तमान नेपालको स्थिति दिनानुदिन खस्कँदो छ। राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरु आफ्नो र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकी सीमित स्वार्थमा तल्लीन देखिन्छ।
Wednesday, 10 April 2013 11:45	डा. विपिन अधिकारी
त्रिवेणी धाममा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक प्रत्युत्पादक नभए पनि अनुत्पादक हुने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्दैछन्।
Wednesday, 10 April 2013 11:42	डा. विद्यानाथ कोइराला
'केमा भोट दिने? अष्टमी कहिले पर्छ? छोरीलाई के पढाउने?' शिक्षकलाई सोधिने प्रश्न हुन्। यी प्रश्नले हामी शिक्षकको अहं बढायो। मै जान्ने रहेछु भन्ने अहं। राजनीतिक दलहरुले हामीलाई भने- यति भोट त पक्का हुन्छ नि हैन र?
Wednesday, 10 April 2013 11:11	सम्पादकीय
नवलपरासीको परासी बजारमा उद्घाटन समारोहपछि नेपाली कांग्रेस महासमितिका सदस्यहरु त्रिवेणी धाममा विचार विमर्शमा लागेका छन्।
Tuesday, 09 April 2013 10:00	सम्पादकीय
प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित चुनावी सरकारले आगामी असारमा चुनाव गराउन नसक्ने निश्चित भएको छ। यो कुनै हिसावले पनि आश्चर्यको कुरा होइन। चुनावका लागि दलहरु सा"च्चै तयार भएको भए चुनावी सरकारका लागि असारमा चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न हुने थियो। देशको परिस्थिति चुनावको प्रतिकूल थिएन। जनता मानसिकरूपले चुनावका लागि तयार थिए। तर असारको चुनावका लागि चुनावी सरकार गठनमा सहमत भएका चार ठूला दल तयार थिएनन्। न त चुनावी सरकारका मन्त्रीहरु नै मानसिकरूपले यसका लागि तयार थिए। कुनै पनि अराजनीतिक प्रकारको चरित्र भएको सरकारका लागि यो अस्वाभाविक पनि थिएन।
'बुमर्‍याङ' हुने खालको जेहाद
Tuesday, 09 April 2013 09:57	राजेन्द्र महर्जन
नारा जतिसुकै कडा भए पनि, माग लागु गर्न जतिसुकै कठिन भए पनि नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दलले नेपाल-बन्दजस्तो सबैभन्दा सजिलो संघर्षको बाटो रोजेका छन्, संघर्षका अरु प्रभावशाली मार्ग नभएकै भान हुनेगरी। एउटा वक्तव्य, दुई-चार वटा तोडफोड र केही गिरफ्तारीको मूल्यमा नेपाल-बन्द गर्न सकिने भएकाले संघर्षका अन्य प्रभावशाली बाटा नरोजिएको हुन सक्छ। नेकपा-माओवादीले पनि संघर्षको रूप छान्ने मामिलामा पनि कुनै सिर्जनात्मकता र नवीनताको आभास दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो। जनतालाई आन्दोलित गर्नेखालको आन्दोलनको रूप सिर्जना गर्न र अँगाल्न सकिएन भने जतिसुकै जायज माग पनि प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसमा पनि नीति-निर्णयकर्तालाई भन्दा पनि नीति-निर्णयको अधिकार नदिइएका जनतालाई नै सिकार गर्नेखालको नेपाल-बन्दले त बन्द आह्वानकर्तालाई नै 'बुमर्या्ङ' (आफैँतिर फर्किएर आउने अस्ट्रेलियाली अस्त्रको प्रहार)को शिकार बनाउन सक्छ। हुन त आफ्ना 'बोनाइफाइड' कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर नेपालै बन्द गर्न नेकपा-माओवादीलगायत् ३३ दल सफल भएका छन् तर बन्दको शिकार भएका आमजनताको समर्थन प्राप्त गर्न भने उनीहरू सफल भएका छैनन्।
शहीद बिर्संदैछ एमाले
Tuesday, 09 April 2013 09:54	चेतनाथ आचार्य
एउटै ताँदोबाट छुटेका हामी तीरहरु
जब्बर फलामे भित्ताहरु पार गर्दै
प्रचण्ड वायुवेगमा सनसनाउँदै
आँधी र हुरीको सृष्टि गर्दै
अवश्य छेड्ने छौँ वैरीका छातीहरु।
Tuesday, 09 April 2013 09:51	गोविन्द अधिकारी
नेपाली कांग्रेस अहिले सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कसीमा विफल देखिन पुगेको छ। स्थापना कालदेखि कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् थियो र यो निष्ठा धेरै हदसम्म सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रकट हुने गरेको पाइन्थ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा समेत कांग्रेसले सम्झौता गर्न थाल्यो। आफ्नो पहिचान र प्रकृतिविपरीतका सम्झौताले कांग्रेसलाई अहिलेको स्थानमा पुर्यारएको हो।
दुखेको विदेशी मन
Tuesday, 09 April 2013 09:47	माधवी भट्ट
केही हप्ताअघि कलंकीबाट सौराहा जाने माइक्रो बस चढ्दै थिएँ। एक जर्मन युवतीले सोधिन्- 'हाउ मच डिड यु पे फर दि टिकट?' मैले जवाफ फर्काएँ- 'इट्स थ्री हन्ड्रेड एण्ड फिप्टी पर हेड।' मुख अमिल्याउँदै तिनले भनिन्- 'इट्स सिक्स हन्डे्रड फर मि।' खासमा जमलबाट सिधै सौराहा जाने पर्यटक बस भन्दा सस्तो ट्रान्सपोटेसनको खोजीमा उनी माइक्रोबस स्टेसन पुगेकी रहिछन्। उल्टो ठगिइन्। जर्मन महिलाको यो भोगाइ त एक उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौंदेखि सौराहा, लुम्बिनी, तानसेन हुँदै पोखरा पुग्दा र त्यहाँबाट काठमाडौं फर्कंदा दर्जनौं पर्यटकमाथि विभेद र दुर्व्यवहार गरिएको देखें । ओभरचार्ज, धकमधक्का, अपशब्द वा आर्थिक प्रलोभन मिश्रित चाकडी झेल्न पर्यटकहरु जहीँतहीँ बाध्य देखिए।
समाचारमा सीमित नहोस्
Tuesday, 09 April 2013 09:46	राजेन्द्र ज्ञवाली
'यसलाई त सबै मिलेर तह लगाउनैपर्छ नत्र भने गाउँमा अप्ठेरो पर्छ, धेरैलाई अप्ठेरो पारिसकी यसले।' गाउँकै एक जना प्रौढ व्यक्तिको कुरा सुनेपछि मलाई अचम्म लागेर आएको थियो। ती प्रौढ व्यक्ति मात्र नभई धेरैको विचार ती महिलाप्रति त्यस्तै थियो। ती महिला बोक्सी भएको धारणा सबैको थियो। सबैले उनलाई घृणा गर्थे। दुई चार जना जम्मा भएको बेला उनै महिलाबारे कुरा हुने गर्थ्यो। सबैको धारणा तिनलाई तह लगाउनैपर्छ भन्ने थियो। म भने निकै द्विविधामा थिएँ। मेरो किशोर मस्तिष्कले बोक्सी जस्ता कुरामा विश्वास गर्दैन थियो। तर मनमा भने नजानिँदो किसिमको संकोच ती महिलाप्रति उत्पन्न भएको थियो।
नक्कली प्रहरीको आतंक
Monday, 08 April 2013 10:16	सम्पादकीय
नेपाल प्रहरीले आपराधिक सूचना संकलन गर्न बर्दी लगाउनु उचित नहुने ठानी प्रहरीलाई सादा पोशाकमा खटाउने गरेको छ। बर्दीमा खटिएका प्रहरीभन्दा उनीहरुको भूमिका बढी हुने देखेर प्रहरी संगठनले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय देशभरका घटनाले स्वयं सुरक्षाकर्मीको आफ्नो पेशाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइदिएका छन्। अर्कातिर उनीहरुको कमजोरी पत्ता लगाएर नक्कली प्रहरी बन्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ। राजधानीलगायत् देशभर भइरहेका घटनाले सादा पोशाकमा खटिएर अपराधमा संलग्न सक्कली प्रहरी र तिनको नक्कल गर्दै प्रहरीको पहिचान दिएर ठगी गरिरहेका अपराधीबारे पोल खुलाइदिएका छन्।
Monday, 08 April 2013 10:14	युवराज संग्रौला
फेरि पनि देशले भोगिरहेको कठिन र खतरायुक्त संक्रमणकालले निकास पाउने बाटोमा अवरोध देखिइरहेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेका राजनीतिक दलहरु आफू चोखा र निर्वाचनका लागि गठित सरकार गलत भएको दाबी गर्दै भाषण गरिरहेका छन्। कुनै कुरालाई वा कुनै मानिसलाई झुटो प्रमाणित गरेर आफूलाई साँचो प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यो तर्कशास्त्रको सामान्य नियम हो। अर्थात् साँचो के हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न त्यो झुटो होइन भनेर प्रमाणित गरेर पुग्दैन। अर्थात् दुई र दुई जोडेर ५ हुँदैन भन्ने कुरा बताएर दुई र दुई जोड्दा किन प्रतिफल ४ हुन्छ भन्ने कुराको उत्तर हुन सक्दैन। अर्थात् सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेन भनेर राजनीतिक दलले आफूलाई ...सत्य र साँचो' सावित गर्न खोज्नु एउटा ठट्टामात्र हुनेछ। वास्तवमा निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य राजनीतिक दलका नेताहरुबाटै अवरुद्ध भइरहेको छ।
Monday, 08 April 2013 10:12	देवी सापकोटा
आर्थिकरूपमा सक्षम नहुँदा महिलाले झनै धेरै हिंसा खपेर बसेका उदाहरण हाम्रा वरिपरि प्रशस्तै छन्। केही समयअघि चितवनस्थित आदर्श गृहमा बस्दै आएका हिंसापीडित महिलाहरुको कारुणिक व्यथा सुन्दा लाग्यो- महिला आर्थिकरूपमा सक्षम नभएकै कारण घर परिवार र पुरुषले जस्तोसुकै हिंसा गर्न सक्छन्। विवाह भएको ५ दिन पनि बित्न नपाउँदै घरबाट निकालिएकादेखि काम गर्न नसकेको निहँुमा घरबाट खेदिएका दर्जनौं महिला उक्त गृहमा बस्दै आएका छन्। यस्तै वेदना र पीडाबाट गुजि्ररहेका दिदीबहिनीलाई सीप सिकाउन लागिपरेकी मीना अहिले सबैको प्रशंसाकी पात्र भएकी छन्।
पस्मिना क्षेत्र र वाणिज्य नीति
Monday, 08 April 2013 10:12	बद्रीबहादुर कार्की
च्याङ्ग्रा जातको एक प्रकारको बाख्राको रौंबाट उत्पादित पस्मिनाको पछ्यौरा तथा सामान अत्यन्तै हलुका, मुलायम, न्यानोपन, हेराइमा राम्रो लाग्नुका साथै व्यक्तित्व पनि आकर्षक देखिने भएकाले यसप्रति लालसा हुनु स्वाभाविक हो। यसबाट निर्मित वस्तु स्वाभावतः महँंगो हुने हुनाले प्रयोगकर्ता विशेषगरी धनी तथा सम्भ्रान्त वर्ग नै हुने गर्छन्। पस्मिना शब्दको उत्पत्ति र विकासका सम्बन्धमा जहाँ जे/जस्तो अवस्थाको व्याख्या/विश्लेषण भए पनि बढी महँंगो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यो डायमण्ड फाइबर वा सफ्ट गोल्ड अफ एसिया नामले चिनिन्छ।
न्यायाधीश : कसलाई?
Monday, 08 April 2013 10:11	रघुनाथ लामिछाने
अहिले न्याय परिषद् सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनौटको प्रसव पीडाबाट गुजि्ररहेको छ। एउटा पक्ष सर्वोच्चभन्दा एक तहमुनिको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशबाट मात्र सर्वोच्चमा ल्याइनुपर्छ भन्ने अडानमा छ भने नेपाल बार एसोसिएसनसहितको अर्को पक्षचाहिँ सरकारी जागिरेबाहेकका कानुनका ज्ञातालाई पनि न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यी दुई अडानबीच सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पाउन सकेको छैन। जसका कारण १५ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा एक तिहाईले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
बजारमा एकाधिपत्य जमाउने रोग
Monday, 08 April 2013 10:10	विनोद सिजापती
खुला बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन एकाधिपत्य जमाएर बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति हो। बजार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न उद्यमी तथा व्यापारीहरु बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आएका वा आउन सक्ने प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई हतोत्साही तुल्याउँछन्। विभिन्न बाधा अड्चन तथा अत्तो थापेर सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई बजारमा छिर्न दिँदैनन्। एकाधिकार कायम गर्ने मुख्यतः दुई कारण हुन्छन्। प्रथम आफैँले अर्थात् एउटै व्यापारी र उद्यमीले बजार सम्पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा राख्न। दोस्रो एकै किसिमका सामान, वस्तु वा सेवा उत्पादकहरुको मिलोमतोमा बजारलाई नियन्त्रणमा लिने। जसरी भए पनि बजारलाई नियन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य उत्पादित वस्तु सामान वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यमा आफ्नो वर्चस्व वा एकाधिकार स्थापित गरेर अधिकभन्दा अधिक मुनाफा कमाउनु हो। यो प्रक्रियामा कच्चा पदार्थ न्युन मूल्यमा खरीद गरिने अनि उपभोक्ताले बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ। स्रोत र साधनको उपयोग एक व्यक्ति वा एउटा गुटको लोभ पूर्तिमा सीमित हुनपुग्दा आर्थिक क्षेत्रको उत्पादकत्व कम हुन्छ। अन्ततोगत्वा मुलुक घाटामा पर्छ।
जहाज थप्ने राम्रो निर्णय
Sunday, 07 April 2013 11:03	सम्पादकीय
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले शुक्रबार दुई नयाँ जहाज खरीद गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। यसबाट विदेश यात्रा तथा रोजगारीमा गएका नेपाली यात्रुलाई आफ्नै देशको जहाजमा यात्रा गर्ने अवसर मिल्नेछ। यसबाट विदेशमा नेपालको पहिचान बढाउने मात्र नभई अन्य विमान सेवाको माध्यमबाट विदेशिँदै गएको पैसामा रोक लाग्नेछ। त्यस्तै विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुनेछ। साँढे दुई दशकदेखि एउटा पनि नयाँ जहाज किन्न नसकेको निगममात्र होइन, सारा नेपालीलाई यो खबरले खुसी बनाएको छ। विशेषगरी खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न जाने नेपालीलाई थप रौनक दिएको छ। यहाँबाट विदेशी वायुसेवा कम्पनीका जहाजमा महँगो टिकट काटेर भाषा पनि नबुझ्ने एयर होस्टेससँग खाना वा पेय माग्दा समस्या भोगेका उनीहरूलाई अब केही राहत पुग्नेछ। आफ्नै देशको झन्डा फहराउँदै उड्ने जहाजमा नेपाली भाषामै कुरा गर्दै जानुको मजा छुट्टै हुन्छ नै।
त्रिवेणी धाममा कांग्रेस
Sunday, 07 April 2013 11:00	किशोर नेपाल
चुनावी सरकार गठनलगत्तै माओवादी पार्टीको वैचारिक ध्रुवीकरण र विभाजनका प्रभावहरु सडकमा देखिन थालेको अवस्थामा घोषितरूपमै देशको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठक नवल-परासी जिल्लाको सीमान्तमा रहेको हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणी धाम तटमा हुन थालेको छ।
कमलरी मृत्युपछिका केही प्रश्न
Sunday, 07 April 2013 10:59	मानबहादुर क्षत्री
दाङको लालमटियाकी सिर्जना चौधरीको अघिल्लो साता ललितपुरको चाकुपाट ललितपुरस्थित मालिकको घरमा मृत्यु भयो। उनको मृत्यु मटि्टतेल छर्केर आगो लगाएर भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। दाङ कमलरी मुक्त जिल्ला हो। यो जिल्लामा कमलरी राख्न नपाउने र यहाँबाट पठाउनसमेत नपाउने घोषणा भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ तर पनि यस्ता समाचार आउनुले लुकिछिपी यस्ता अवैध काम भइरहेको खुलेको छ। जबकि यस्तो घोषणा हुनुअघि दाङबाट वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी किशोरीहरु कमलरीका रूपमा काम गर्न जिल्ला बाहिरिन्थे।
रक्तचाप नियन्त्रण गरौं
Sunday, 07 April 2013 10:57	डा. हेमराज कोइराला
सफल जीवन जीउनका लागि स्वास्थ्यको अपरिहार्यता महसुस गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको भातृ संगठनका रूपमा ७ अप्रेल १९४८ का दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन गठन भएको हो। सदस्य राष्ट्रबीच स्वास्थ्यसम्बन्धी पारस्परिक सहयोग विकसित गर्न एवं स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणवत्ता नियन्त्रणका लागि मनविन्दु निर्धारण गर्ने यो वैश्विक संस्था हो। यस संस्थाको स्थापना दिवसलाई 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' का रूपमा हरेक वर्ष मनाइन्छ। सधैंझै यस वर्ष पनि 'आफ्नो रक्तचापलाई नियन्त्रण गरौं' भन्ने नाराका साथ यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ।
बौद्धिकताको यो इनिङ
Friday, 05 April 2013 10:44	युग पाठक
अनुहारमा नेपालको झण्डा पेन्ट गराएर आएका दुई क्रिकेटप्रेमी मित्र पवन र जानकीशरण हुटिङ गर्दै सुस्ताउँदै दर्शकदीर्घामा बसेका थिए। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको दर्शकदीर्घा खचाखच भरिएको थियो। दृश्य बुधबारको हो। एसिसी ट्वेन्टी-२० कप फाइनलमा नेपाल र अफगानिस्तानबीच भिडन्त भइरहेको थियो। पहिलो इनिङको पावर प्लेमै नेपालमाथि अफगानिस्तान भारी परिसकेको हुनाले दर्शक स्तब्ध देखिन्थे। पंक्तिकार पेभिलियन नजिकैको खुल्ला टेन्ट अघिल्तिर थियो र त्यहाँबाट खेल मैदान नजिकै थियो। क्रिकेट मैदान स्टेडियमका रूपमा विकास नभइसकेको हुनाले अधिकांश दर्शक घाममा सेकिएर खेल हेरिरहेका थिए। दर्शकदीर्घामा केही खुला टेन्ट राखिएका थिए र अस्थायीरूपमा मैदानलाई टिनका पाताले घेरिएको थियो। हेर्दाहेर्दै दर्शकको भीडले बाहिरैबाट टिनको घेराबार भत्कायो र हुरुरुरु मान्छे ओइरिएको दृश्य देखियो। प्रतिस्पर्धात्मक खेल अघि बढिरहँदा केही यस्ता दृश्य र संवादहरुको सामना गर्नुपर्यो कि हाम्रो समाजको सांस्कृतिक स्तरबारे मगजमा अनेक प्रश्न उठ्न थाले।